सृष्टिको निरन्तरता,(शर्मिला खडका (दाहाल)) प्रकृतिले सृष्टि गरेको जीवमध्ये मानिस मात्र यस्तो जीव हो जसले सृष्टिको निरन्तरता निर्वाधरूपमा आफ्नै ढङ्गले परिष्कृत गर्दै लगेको हुन्छ । जीवनको भोगाइमा सृष्टिको नयाँनयाँ रूपमा मानिस साक्षात्कार गर्दै जान्छ । सृष्टिको निरन्तरतामा यस्ता भोगाइहरू नभोगिने भए मानिसले आफनो जीवनलाई परिष्कृत गर्दै लानको सटटामा सृष्टि नै विनाश हुने सम्भावाना रहन्थ्यो । तर मानव जीवनको यति ठूलो निरन्तरतामा अहिले मानवले आफै परिष्कृत गर्नको बदला विकृत बनाउँदै लगेको छ । आज मानव जीवनको सृष्टिको निरन्तरतामा नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सृष्टिको वृक्षको रुपमा रहेको नारीजाति यस्तो एउटा जीवन हो जसले अनेकौँ अनुभूतिको भन्डार बोकेर जीवनको यात्रामा दौडिरहेको हुन्छ । निबन्धकार कृष्ण धरावासीले ‘नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर’ भनेर नारीको रूपलाई व्याख्या गर्न खोजेको केही वर्ष बिते । तर नारी जीवनको रङ्ग, आकार रूप भोगाइ कति हुन्छन् भन्ने कुरा अनादिकाल देखि नै व्याख्या गर्न खोजेपनि अव्याख्यातित रहेको छ । नारी सृष्टिका संवाहक हुन् । नारीकै कोमल हृदयले आजसम्म सृष्टिलाई निरन्तरता दिइआएको छ । म पनि सृष्टिकर्र्ता नारीको एक अश हु।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
अहिले म अस्पतालको पोस्ट ओपरेटिभ कक्षको बाहिर छु । छोरीको प्रसुति नर्मल हुन नसकेपछि डाक्टर चन्दा कार्कीले सिजरिङ्ग गरेर बच्चा निकाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । अहिले उसलाई अप्रेशन थिएटरमा लागिएको छ । मलाई अचम्म लाग्छ । सृष्टिको निरन्तरता म मेरी छोरीसम्म आइपुगेकी छु । म आफूसँगै सृष्टिलाई निरन्तरता दिई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउने मेरी आमा, मेरी हजुरआमालाई सम्झन पुग्दछु । करीब चौध महिना अगाडिको मेरो घरमा हुन लागको छोरीको विवाहको चहलपहलमा आफूलाई डुबाउँछु । घरभरि बिबाहको रमाइलो वातावरण छ । सबैभन्दा ठूलो चटारो मलाई परेको छ । छोरीको विवाहले विवाहसम्म आइपुग्नुपर्ने सबै धर्म पुरा गरिसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो धर्म छोरीले केटो मन पराएपछि र केटाले छोरीलाई मन पराएपछि विवाहरूपी गाडीले इन्जिन स्टार्ट गरेको थियो । विवाहसम्बन्धि सम्पूर्ण प्रस्ताव, मान्यता र सामाजिक रितिथितिले दुवैतिरबाट मान्यता भनौ वैधानिकता पाएपछि आत्मीयता र भावनात्मक सम्बन्धको सडकमा विवाहरूपी गाडी निर्धक्क दौडन थालेको थियो । प्रायः सबैको छोरीको विवाहमा हुने क्रियाप्रतिक्रियाले हाम्रो छोरीको विवाहमा पनि औपचारिक मान्यता पायो र यसले पूर्णविराम लियो । जन्माएर कति दुःख गरेर आफूले हुर्काएको छोरीलाई कहिल्यै नदेखेको र नजानेको ठाउँमा पठाउन त्यति सजिलो थिएन । त्यसमा पनि आमा जो सबै किसिमको भोगाइबाट भुक्तमान भएर आएको हुन्छ उसलाई ठूलो पीडा हुन्छ । पूर्वीय समाजमा नारीले भाग्नुपर्ने सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण र महत्वपूर्ण भोगाइ नै यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । आफू जन्मेर , हुर्केर बढेको ठाउँलाई चटक्क माया मारेर बग्लै किसिमको वातावरणमा पुगेर त्यस वातावरणमा घुलमिल भई त्यसलाई आफनो बनाउनु कुनै चानचुने कुरा होइन । सामाजिक मानयताको कुरा, रितिथिति, चालचलन, लवाइखुवाइ र बेग्लै परिवेशको वातावरणसँगै भिजेर उनीहरूको विचारमा आफूलाई ढाल्न त्यति सजिलो हुन्न । धेरैजसो नारीहरूले यसलाई आफूले भोग्नुपर्ने जीवनको एउटा पाटो सम्झेर सम्झौतागर्न पुग्छन् तर कतिपयले आफूलाई ढाल्न नसकेको अवस्थामा घरेलुहिंसाको शिकार हुन पुगेका छन् । घर परिवारले सुरुको अवस्थामा बुझिदिएनन् भने नारीलाई गारो हुन्छ । यी सब कुरा भोगिसकेको मलाई छोरीको विषयमा चिन्ता लाग्नु स्वभाविक थियो । तर केटाको विषयमा भएका कुरा निकै गहकिला थिए । एउटा प्रतिष्ठित शिक्षण सस्थामा सहायक प्रोफेसर भई प्राविधिक विषय पढाउनु भनेको बौद्धिकताको उच्च मूल्याकन थियो । गाउँघरमा साथीभाइले उहाँको विषयमा गरेको चर्चाले उहाँको व्यक्तित्वमा थप बढी अक थपिदिएको थियो । यसरी सबै किसिमको छनौटमा जुवाइको मूल्याकंन उच्च भएको थियो । जीवनमा धेरै किसिमको भूमिका निर्वाह गरिसकेको मलाई किन हो सासूको भूमिका निकै चुनौतिले भरिएको लाग्दथ्यो । विवाहको चहलपहल चलिरहदा अरूले भन्ने यो कुरा आइरहन्थ्यो कि ‘छोरीको घर बन्न र बिग्रनमा आमाको ठूलो भुमिका हुन्छ ।’ के छोरीको सासूको भूमिका चाहिँ रहन्न र मलाई सोध्न मन लाग्थ्यो । हाम्रो समाजले छोरी र छोरीको आमालाई पितृसतात्मका सोचको भारी बोकाइएको देख्दा नारीहरूले आफूले नै ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । उमेरले सासू बनिहाल्ने भइ नसकेपनि व्यवहारले पक्कै यो भूमिका सफलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने लाग्दथ्यो । यसको लागि अरूहरूले आफ्नो जुवाइलाई गरेको व्यवहार सम्झन्थे । सबैभन्दा बढी मेरी आमाले मेरा श्रीमान्लाई गरेको व्यावहार सम्झन्थे अनि मेरी हजुरआमाले मेरो बुबालाई गरेको धमिलो सम्झनालाई उघार्थे । हुन त समयको घरातलमा व्यवहार, विचार रहनसहन, जीवन बाँच्ने शैली ने फरक परिसकेको छ तर पनि प्रमुख कुरा उही केबुलकारमा घुमेको कारझै हाम्रो जीवनमा घुमिरहेको छ त्यो हो – सृष्टिको निरन्तरता । छोरीको विवाहको कुरो छिनेपछि म आफ्नो विवाह भएताकाको संस्मरणमा डुब्न थालिसकेकी थिए । मेरो विवाह छोरीको जस्तो थिएन । म धेरै कुरालाई तुलनात्मक रूपले विवेचना गर्दथे । मेरो विवाह मेरो राजीखुसीमा भएको थिएन । म पढन चाहन्थे तर म मुनिका सातजना भाइवहिनी र दाजुहरूको भविष्य सोझै मेरो भविष्यसँग गाँसिएको थियो । दुई दाजुको विवाह गर्ने बेला बितिसकेको थियो । दुई आमाका दस जना सन्तानमा पालो लाग्न कसैलाई हतार भएको थियो भने कसैलाई बाध्य पारिएको थियो । परिवेशको परिवन्दले विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता थियो मेरो । विहे अघि मैले दुलाहाको अनुहारसम्म देख्न पाएकी थिइन । त्यसबेलाको समय अहिलेको जस्तो थिएन । अहिले मेरी छोरी विवाहका लागि निकै उत्साहित थिई भने मोबाइलमा आउने जुवाइको फोनले रोमान्चित हुने गर्दथी । मबाट मेरी छोरीसम्म आइपुग्दा समयको धारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । छोरीलाई जुवाइले राम्रोसँग बुझ्नसक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको दरिलो खम्बो मनमा गाडिएपछि सम्पूर्ण तवानबाट मुक्त भएझै लाग्यो मलाई । छोरीको विवाह त्यति सजिलो हुन्न सबैको लागि । धेरै कुराको तालमेल, मौद्रिक व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक असर, चालचलन र भावनाका कुराहरू आउँछन् । म यी सबै कुरामा सतर्क थिएँ । अझ आफन्त र इष्टामित्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । छोरीको बिदाइको क्षण निकै कठिन हुन्छ । यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । माउले चल्लालाई आफूसँगै लिएर चारो चर्न लगाएर अरू पनि धेरै कुरा सिकाएपछि चिलले च्याप्प चेपेर लगेको जस्तो हुँदो रहेछ । इटहरीको गर्मीमा हातमा डो¥याउँदै आफूसँगै स्कुल लिएर जाने गर्दथे छोरीहरूलाई । छोरीको हाँसो, खुसी, भोक प्यास, दुःख बिमार सबैलाई जीवनले आत्मादेखि नै सम्झौता गरको थियो । उसको हासो मेरो खुसी हुन्थ्यो भने उसको दुख मेरो रोदन । सबै संस्मरण नोस्टाल्जिक बनेर मस्तिष्कमा घुमिरहदो रहेछ । छोरी बिदाइ गरेर घर आएपछि घर नै रित्तो भएझैँ लाग्यो । घरभरि विवाहका लागि आएका पाहुना भएपनि आफनो साथबाट छाया कतै अल्झेर झरको जस्तो भइरह्यो । छोरीको सम्झना घरभरि आफूसँगै डुलिरहरयो । छोरीले यो बेला के गर्दै होली भन्ने सम्झनाले झस्काइरहयो । जीवनको एउटा ठूलो उत्सर्ग मान्छु म छोरी बिदाइ गर्नुलाई । सायद यो उत्सर्गबाट पाइने पीडा र वेदनालाई पनि छोरी बिदाइ गर्नेहरूले जीवनको अनुभूतिसँग खेल्ने रमाइलो क्षण मानेर स्वीकार गर्नुपर्छ । किनकि यस पीडालाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिएन भने मानिसले आफूलाई मात्र होइन भोलि छोरीलाई पनि दुखित बनाउन सक्छन् । छोरीको घर बिग्रन सक्छ । यस उत्सर्गलाई धार्मिक विचारधारा अनुसार पनि जीवनमा कमाइने ठूलो धर्मको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । सृष्टिको निरन्तरताका लागि दिइने ठूलो त्याग र बलिदान हो यो । आज मलाई मेरी आमाले जन्माएर हुर्काएर विहे गरी मेरा श्रीमान्को हातमा नदिएको भए मैले चारवटा सन्तान जन्माइ सृष्टिलाई निरन्तरता दिने थिइन हुलाँ । त्यस्तै मैले पनि छोरी जन्माएर हुर्काएर सृष्टिको निरन्तरताका लागि योग्य बनाई जुवाइको हातमा नसुम्पेको भए मेरी छोरी सृष्टिको संवाहक हुने थिइन । त्यसैले यस्ता कार्य मेरो मात्र होइन मजस्ता कर्म गर्न सौभाग्य पाउनेहरूको महानता हो । तर यस्तो महान कार्यलाई आज नारीप्रति हेरिने हेय दृष्टिले तुच्छ कार्य र बोझिलो कार्य बनाइदिएको छ । आज कतिपय छोरीहरू पेटमा नै भ्रुण अवस्थामा नै हत्या गरिन्छ । यो एउटा ठूलो सामाजिक विडम्बना भएको छ । आज हामी कोही छोरी चाहँदैनौं । हामी आमा, दिदीबहिनी, काकी, भाउज्यू चाहन्छौ तर छोरी भन्ने बित्तिकै स्वयम् हामी सृष्टिका संवाहक नै आखा चिम्लन्छौँ । आज भारत र चीनमा सयौँ बालिकाहरू भ्रुणमा नै हत्या गरिएको हुनाले त्यहाँ छोराहरूको विवाहको लागि ठूलो समस्या देखिइसकेको छ । छोरीको भ्रुण हत्याको दर्दनाक कहानी भारतीय सुपरस्टार अमीर खानले चलाएको रियालिटी शोको 'सत्यमेव जयत'भन्ने कार्यक्रममा दिइएको थियो । एउटी भारतीय महिलाको गर्भमा रहेको बालिकाको भ्रुण छैठो पटकसम्म उनका श्रीमान् र सासूले हत्या गरेपछि उनको अर्को पटक विद्रोह गरी छोरी जन्माइ श्रीमान्लाई डिभोर्स दिइएकी थिइन । यसरी यहाँ आएर भ्रुण हत्या गरिनुमा स्वयम् नारीको अवस्था नै दयनीय देखिएको छ । हामीले छोरी नचाहनुमा समाजमा छोरीप्रति गरिने व्यवहार हो । सृष्टिको यति ठूलो निरन्तरता गर्भमा तुहिएपछि भोलिको मानव जीवन के हुन्छ ? हामी कोही सोच्दैनौ भोलिको हाम्रो मानव वंशका निरन्तरताको लागि । आज यस विषयमा धेरै वहस भइरहेको छ र हुन पनि पर्नेछ । नत्र भोलि मानव वंश नै लोप हुने अवस्था आउँछ । विशेषगरी हस्पिटलमा यो दृश्य देख्न पाइन्छ जहाँ छोरा र छोरीको जन्म हुन्छ । छोरा जन्मियो भन्ने बित्तिकै श्रीमान् र आफन्तहरूको अनुहार बेग्लै हुन्छ । छोरी जन्मियो भने कुनै ठूलो युद्धमा हारेर जीवन नै बन्दकी भएझै व्यवहार गर्छन् । यतिसम्म कि मृत्युको मुखमा पुगेर जन्माएकी सुत्केरीलाई समेत वेवास्ता गर्छन् । आज समाजमा दुई छोरी पाउने आमाको हालत अत्यन्त दयनीय पीडादायी हुन्छ जुन कुरा मैले दुई छोरी जन्माउँदा भोगकी थिएँ । हुन पनि हो छोरालाई हुर्काउन जतिको सजिलो हुन्छ छोरीलाई हुन्न । छोरीलाई हुर्काउन धेरै कठिन हुन्छ । विभिन्न किसिमको तनावबाट बुबाआमा गुज्रिनुपर्छ । छोरीलाई सुरक्षित प्रकारले हुर्काइ राम्रो संस्कार दिई श्रीमान्को घर पठाउन्जेलमा बुबाआमाले धेरै ठूलो लगानी लगाउनुपर्नेछ । यति गरेर पनि भोलि छोरीको जिन्दगी के हुने हो ? श्रीमान् र घर परिवारले के कस्ता व्यवहार गर्ने हुन् भन्ने मनको संतापले पिरोलिरहन्छ । अझ पत्रपत्रिका छापिने नारीहरूलाई मारिएको घटनाले अझ बढी तनाव दिन्छ । विशेषत नारीको असुरक्षित भविष्यको संतापले बुबाआमालाई चिन्ताको चितामा जलाइरहन्छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि आजको अति व्यस्त र भौतिक सुविधामा रमाउन चाहने धेरैजसो बुबाआमा छोरी चाहदैनन् । त्यसैले पनि आज समाजमा नारीप्रति हेरिने दृष्टि र व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आउनुपर्छ । यसको लागि नारीहरू स्वयम्ले क्रान्तिकारी पाइला अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको महसुस मैले गरेकी छु । एकछिन पछि नर्सले भित्रबाट बोलाइन् हातमा बच्चा लिएर । उनले बच्चाको तौल र लिङ्ग बताइन् । ‘ओहो ! मेरी नातिनी !’ मेरो मुखबाट निस्कियो र अर्को सृष्टिको निरन्तरता सुरु भयो उही केवुलकारमा घुमेको कारझैँ ।